Nei mabhurugwa emhando yepamusoro achifanira kushandisa ecommerce? | ECommerce nhau
Nei ma brand emhando yepamusoro achifanira kushandisa ecommerce?
E-commerce mukana wekuti vazhinji vatengesi vatengesi vanga vachizeza kushandisa. Nekudaro, nemusika wakagadzirirwa kuputika, kutsva kutsva kunoratidza kuti nekuda kweruzivo kubva ku chiitiko chevatengi vavo pamhepo, zvigadzirwa zvemhando yepamusoro zvine mukana wekuziva 80% yevatengi vavo muchitoro nemazita.
Tsvagiridzo "Dhijitari Frontier 2016: Dhijitari Yemahombekombe iri kutendeuka zvakanyanya", inoitiswa neContactlab pamwe neEexane BNP Paribas, inoratidza kuti mabrandi anofanirwa kushanda nesimba kutora mikana Ecommerce yekubatana nezvako zvitoro kana zvasvika pakupa yakabatanidzwa yekutengesa uye kushambadzira ruzivo.
Chirevo chinoratidza izvo vatengi vanogona kubatika manhamba, inomiririra 27% yemari irimo muchitoro uye makota matatu eEcommerce mari. Vatengi vakadaro vane yavo yekuyambuka-chiteshi kuuraya muzana, iri 50% yakakwira kupfuura muzvitoro zvine yakasarudzika vatengi.
Sekureva kwaMassimo Fubini, CEO weContactlab, zvigadzirwa zvemhando yepamusoro zvinofanirwa kuchinja maonero avo uye kuvhura mikova kune mabhenefiti ekudyidzana nevatengi vemadhijitari. Uku kusangana kwedhijitari nevatengi kuri kushandura indasitiri yakasarudzika uye nekutenda nekukwira kweanowanikwa ecommerce maturusi, Mavara ane ruzivo rwese rwakanangana nezviitiko zvepamhepo zvevatengi.
Izvi zvinovatendera kuti vazive 80% yevatengi muchitoro nemazita. Kubudirira kwe zvigadzirwa zvemhando yepamusoro zvinovimba nekwaniso yavo yekupinda mumaphrofayli edhijitari evatengi uye mukutenga zvisarudzo, kuitira kuti zvienderane nekuzvipira.
Vatengesi Vemahombekombe Vanogona Kuhwina Zvakawanda Kutengesa Kupfuura Asingazivikanwe Mutengi Engagement ichivatungamira kuhukama hwakazvipira pane dzakasiyana nzira Kana zvigadzirwa zvikasaona nzira dzepamhepo idzo vanhu vanogona kusangana nadzo nevatengi chero kupi, vari kurasikirwa nemukana wekuwana yakajeka uye yakajeka pfungwa yevatengi maficha, maitiro uye zvavanofarira.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » Marketing » Kutengeswa kweIndaneti » Nei ma brand emhando yepamusoro achifanira kushandisa ecommerce?
Nyowani Ecommerce Ongororo neEuropean Commission
Yemunhu Kushambadzira Inobatsira Kutyaira Webhu Traffic